वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : September 2009
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ September 25, 2009
Image Sorce: Click here विजया-दशमी २०६६ को उपलक्षमा यो ब्लगमा पाल्नुहुने समस्त माहानुभावहरु र परिवारजनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु!!!
यहाँहरु सबैको जीवनमा सधैंभरी सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलता छाईरहोस्!!!
एउटा सानो कोसेलीको रुपमा, पोहरनै यो ब्लगमा टाँसिसकेको कविता "जब लुकी-लुकी चियाऊँछ रंगीन शरद" पाठ गर्दै बिदा हुन चाहन्छु यस पटक।
हस् त फेरि एक पटक तपाईँ र परिवारजनमा बडा दशैं-२०६६ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!
RANGEEN SHARAD - Basanta Gautam
केपी ओली र त्यो पुस्ताका नेताहरुले संघर्ष गरेका पक्कै हुन् र आफ्नो ब्यक्तिगत जीवनको एउटा लामो चरणलाई बलिदान गरेकै हुन् तर देश संघर्ष र संक्रमणको चरणबाट अझै पार हुन सकेको छैन। स्थिति उल्टो झन्-झन् गम्भिर हुँदैछ। स्पष्ट भएर भन्नुपर्दा, त्यो पुस्ताको नेतृत्व अथवा अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा जो-जो छन्, उनीहरुलाई सफल भन्न सकिने दिन अझै आएको छैन। भन्न त कत्रा-कत्रा क्रान्ति ग-यौं, राजा फ्याँक्यौं, यो ग-यौं र त्यो ग-यौं भन्लान् तर राजनीतिक परीवर्तन मात्रै हुँदैमा केहि हुने होईन; जनताको पेट भरिने पनि होईन, देश निर्माणको चरणमा जाने पनि होईन र जनताले सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने पनि होईन। राजनीतिक परीवर्तन र कथित क्रान्तिहरुले जबसम्म शान्ति, आर्थिक विकास र निर्माणको चरणमा देशलाई लान सक्दैनन् तबसम्म तिनको केहि अर्थ हुँदैन, चाहे ती जतिसुकै चर्का र कर्णप्रिय नाराका खोल ओढेर सम्पन्न भएका किन नहुन्। खैर यी कुरा छोडौं र लागौं कार्यक्रमतिरै। लगभग दुई-घन्टा लामो कार्यक्रममा जापानवासी नेपालीका तर्फबाट बोल्ने केहि साथीहरुमध्ये म पनि एउटा थिएँ। बोल्नुपर्ला भन्ने मलाई लागेको थिएन, त्यसैले तयारी पनि थिएन। बढीमा तीन चार मिनेट खोकें हुँला मैले। सबै नेपालीझैं देशको बिग्रँदो स्थितिप्रतिको चिन्ता र खबरदारी सुनाउने न हो नेताहरुलाई! केपी ओलीजीको भाषणको बारेमा म कुरा नगरौं, ईच्छा छ भने यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ केहि विवरण। 'ईच्छा छ भने' किनभने नेताहरुका भाषण सुनी-सुनी तपाईँहरुको कान पाकिसकेको हुनसक्छ:) ब्यक्तिगत रुपमा भने मलाई यो भाषण राम्रै र तर्कपूर्ण लागेको हो।
अर्को एउटा प्रश्नमा माओवादीले शुरु गरेको 'झण्डा फेर्ने राग' को बारेमा नेताज्यूको ब्यक्तिगत धारणा सोधिएको थियो; स्पष्ट असमहतिको जवाफ आयो। साँझ सात बजेपछि ओलीज्यू नागोयाका मेयरद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा जानुपर्ने हुँदा कार्यक्रम सकियो।
[लेख्न मन त समसामयिक घटनाहरुका बारेमा थियो तर यसपटक पनि 'इतिहासको ब्याज' मै अड्काउनुपर्ने भयो ब्लगलाई।आज एउटा लघुकथा। २०५६-५७ सालतिर कान्तिपुरको 'साप्ताहिक'मा छापिएको थियो यो। पत्रिकाको टुक्रो पनि साथमा छैन, खेस्रा पनि छैन; स्मृतिको भर लिँदैछु। अलिकति समसामयिक बनाउने कोशिश पनि गरेको छु। कथाको चुरो भने उहि हो।
नेताहरु देखेर त्यतिखेरै पनि दिक्क लाग्थ्यो, अहिले त झन् ठूल्ठूला छलाङ्ग मारिसकेका छन् उनीहरुले; 'नयाँ जोगी' पनि धेरै निस्किसकेका छन्। ]महान नेताएक दिन 'क' शहरमा विशाल आमसभा थियो। देशका 'त्यागी', 'तपस्वी', 'क्रान्तिकारी', 'महान' नेताले लाखौंको जनसागरलाई सम्बोधन गर्नुभयो र भन्नुभयो, "काग सेतो हुन्छ भन्ने अकाट्य तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। यसलाई हाम्रा विपक्षीहरुले अस्विकार गर्न खोज्दै छन् तर म जोड् दिएर के दोहो-याउन चाहन्छु भने काग सेतो थियो, सेतो हुन्छ र सेतोनै रहनेछ र यो नै हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त हो।"
[यो कथा मैले केहि समय पहिला लेखेका तीन कथाहरुमध्येको अन्तिम हो। कथाको विषयवस्तु मेरो मनमा तीन-चार वर्ष पहिलेबाटै डुलिरहेको थियो। कथा लेख्ने समय जुर्दै-जुरेन। अहिले समय जुर्दा पनि विषयवस्तुलाई पेश गर्ने शैलीको निर्णय गर्न ज्यादै गाह्रो भयो। अहिलेलाई यो रुपमा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत छ। मैले यसलाई लेखनकै क्रममा रहेको मानेको छु र केहि दिनका बीचमा यसमा केहि साना वा ठूलानै पनि परीबर्तन हुन सक्नेछन्, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। नेपालको राजनीतिको बारेमा नलेखेको धेरै भयो। ब्लग अचेल साहित्यको बाटोमा एकोहोरिएको छ। यो कथा भने साहित्यिक रचना हुँदा-हुँदै पनि नेपालको राजनीतिको बारेको मेरो बुझाई र प्रतिकृया पनि हो।
“हरिरह सर हुनुहुन्न?” हातमा हेल्मेट झुण्डाएको २५-३० को एउटा मान्छे कोठामा पसेर सोध्यो। “हुनुहुन्न!” कोठामा भएका 'हरिहर सर’बाहेकका कर्मचारीहरुमध्ये एउटाले टाउको नउठाई जवाफ दियो।
हेल्मेटवाला बाहिर निक्लियो। त्यहाँको वातावरणको मौनतामा अलिअलि तनाव देखिन्थ्यो। शायद एक घण्टा अगाडिबाट यस्तै वार्तालाप धेरै पटक दोहोरिईसकेको थियो। बाहिर ढोकाको छेऊमै एउटा त्यस्तै उमेरको अर्को मान्छे पनि थियो, हेर्दा हेल्मेटवालाभन्दा अलिक दुब्लो-पातलो र उदास देखिन्थ्यो। हेल्मेटवाला पनि त्यतै अल्मलियो। “तपाईँ हिजो पनि आउनुभ'थ्यो होईन?” हेल्मेटवालाले सोध्यो।
“हो। चार दिन भयो धाएको, हाकिम आउने होईन।“ “यस्तै हुन् सा--लाहरु! चोरहरु! म पनि अस्तिदेखि कुरिरख्या' छु। यस्तो बेलामा पनि बिदामा बस्ने हो? कि अरुलाई अधिकार दिनुपर्छ---!“
“त्यै त!----आजचाहिँ दिनभरि कुर्नैपर्ला। ----- । बरु एउटा काम भ्याएर एक छिनपछि आउनुपर्ला।“ हेल्मेटवाला निक्लियो। अर्को मान्छे त्यतै बसिरह्यो। "अझै आएको छैन है----!" एकघण्टा जति पछि फर्केर आएपछि हेल्मेटवालाले सोध्यो।
“हो त्यो त----!” शेखरको अनुहारको अघिको फूर्ती देखिएन अहिले। उसको अनुहारले ऊ राजेन्द्रको कुराले अलि-अलि झर्केको देखाऊँथ्यो। --------
----------------------------- "फेरि यसपाली यो 'लोन’ निकाल्नु पनि थियो। बहिनीको बिहेको रिण नतिरी नहुनी भ’छ।" छोटो मौनतापछि शेखरले आफ्नो कुरा शुरु ग-यो फेरि।
"राम्रो घर खोज्दा रिणमा परियो हेर्नुस्। बहिनीको बिहेले गर्दा--। मिल्ने साथीसंग लिएकोले कचकच त गरेको छैन तर तिर्नैपर्ने भएपछि। ---- समरजंग कर्नेलको छोरो हो।“ "ए---!”
"त्यस्तासंग हाम्रो संगत हुने होईन हतपति। यो कर्नेलको कान्छो छोरो, खुब बिग्रेको थियो पहिला। अरु कुनै स्कूलले लिन नमानेपछि हाम्रो स्कूलमा भर्ना गरेका थिए, बाऊ संचालक समितिमा थियो। एसएलसी पनि पास भएन। दाजुहरु सबै सेना-पुलिसमा छन्, यो किरणजंग चाहिँ जग्गाको कारोबार गर्छ।" आफ्नो कुरा ओकल्न निकै उत्साहित देखिन्थ्यो शेखर। "ए---!"
पैसा लिएपछि राजेन्द्र बसपार्कतिर लाग्यो होला, शेखरले देखेन। ---------------------------- मोटरसाइकललाई कम्पाऊण्डको ढोकाको छेऊमा रोकेर शेखरले घण्टी बजायो। एउटा कुकुर भुक्दै आयो। कुकुरको पछि-पछि एउटा मान्छे आएर ढोका खोल्यो। शेखर भित्र पस्यो।
“किरण राजालाई खोज्नु भा' होईन? किरण राजा घरै होईसिन्छ।” । यो घरमा काम गर्ने सबैले शेखरलाई चिनिसकेका थिए। किरणजंग टिभी हेरेर बसिरहेको थियो। टेबुलमा ह्विस्कीको बोतल र गिलास देखिन्थ्यो, कोठामा डुङ्डुङ्ती चुरोटको गन्ध पनि थियो।
"अब म लागें यार। आज धेरै नबसौं।" दुई प्याक तन्काएपछि शेखर उठ्यो। नजिकैको एउटा किराना पसलमा शेखरले दश वटा भिक्स चक्लेट किन्यो। घर पुगुञ्जेलसम्म ऊ मकै चपाएजस्तै भिक्स चकलेट चपाऊँदै थियो।
(सेप्टेम्बर २२, २००५)"जनयुद्ध"
कक्षाहरु प्रशश्त । (अक्टोबर १४, २००५)"शानेवानी"
होस्टेस साठी। -२-
(नोभेम्बर १०, २००५)"परराष्ट्र मन्त्रीको डकार"
(नोभेम्बर २४, २००५)"सरकार"
(नोभेम्बर २८, २००५)"युवा नीति"
(मार्च ६, २००६)आजलाई यत्तिनै। समय मिल्दा साझाको त्यहि धागोमा पसेर पनि पढ्नुहोला।